စနေလင်း| December 6, 2012 | Hits:1
| | လက်ပံတောင်းတောင်ကိစ္စ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ – ဇာနည်မာန်/ ဧရာဝတီ)
mr TM December 6, 2012 - 7:41 pm လက်ပံတောင်းတောင်ကြေးနီစီမံကိန်းအကြမ်းဖက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်တွင်ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်၏မည်သည့်ပုံစံဖြင့်စစ်ဆေးမည်ကိုရှင်းလင်းပြချက်အရပြည်သူလူထုအနေ နှင့်ကြေနပ်နိုင်မည်ဟုထင်ပါသည်၊ရှင်းလင်းပြသည့်ပုံစံအတိုင်းစစ်ဆေးမည်ဆိုလျှင်အမှန်တရား ရရှိနိုင်ပါသည်၊လက်ပံတောင်းတောင်ကြေးနီစီမံကိန်းတွင်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းများပိုင်ဦးပိုင်ကုပွဏီ ဟုဆိုထားသဖြင့်ဦးပိုင်ကုပွဏီသည်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းများသာပိုင်ဆိုင်ပါသလား?အငြိမ်းစား တပ်မတော်သားများအားလုံးပိုင်ဆိုင်ပါသလားသိခြင်ပါသည်၊ထို့အပြင်သတ္ထု.ရတနာနှင့် ဓါတ်ငွေ့ကုပွဏီများအားလုံကိုလဲပြည်သူလူထုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများအတွက်သာအသုံးပြု ရေးအတွက်ဦးပိုင်ကုပွဏီမှသည်ပြည်သူလူထုပိုင်သို့ပြောင်းလဲပေစေလိုပါသည်။
Reply mr TM December 6, 2012 - 8:13 pm လက်ပ့တောင်းတောင်ကြေးနီးစီမံကိန်းအကြမ်းဖက်မှုစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်မှဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်၏မည်သည့်ပုံစံနှင့်စစ်ဆေးမည်ကိုရှင်းလင်းပြခြင်းအားဖြင့်ပြည်သူလူထုအနေဖြင့်ကြေ နပ်နိုင်မည်ဟုထင်မြင်ပါသည်ရှင်းလင်ပြသည့်အတိုင်းစစ်ဆေးမည်ဆိုလျှင်အမှန်တရားပေါ်ထွက် လာပါလိမ့်မည်၊ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းများပိုင်ဦးပိုင်ကုပွဏီဟုဆိုထားသဖြင့်ဦးပိုင်ကုပွဏီသည်ဗိုလ် ချုပ်ဟောင်းများသာပိုင်ဆိုင်ပါသလား?အငြိမ်းစားတပ်မတော်သားများအားလုံးပိုင်ဆိုင်ပါ သလားသိခြင်ပါသည်၊Ex Military Welfair Furn ဟုဆိုသောတပ်မတော်သားများကိုကူ ညီသည့်ဦးပိုင်ကုပွဏီများနိုင်ငံတော်တော်များများတွင်ရှိကြပါသည်၊သို့သော်သတ္ထု.ရတနာ နှင့်ဓါတ်ငွေ့ကုပွဏီများကိုပြည်သူလူထုအားလုံးကိုအကျိုးပြုသောလုပ်ငန်းများတွင်သာအသုံး ပြုစေလိုပါသည်ထို့ကြောင့်ထိုကုပွဏီများအားလုံကိုဦးပိုင်မှသည်ပြည်သူလူထုပိုင်သို့ပြောင်း လဲပေးစေလိုပါသည်။
Reply swe htwe December 7, 2012 - 12:34 am We believe in you, Daw Su. You can carry justice for the country.
Reply mm December 7, 2012 - 4:51 am ဒေါ်စုကို တကယ်လေးစားပါတယ် ၈၈ တွေနဲ့ ကွာတာက မှန်ရာကို လူအများစု မကြိုက် လဲ ပြောရဲ တယ်
Reply smiley December 7, 2012 - 11:11 am exactly
Reply TMM December 8, 2012 - 11:30 am Well said.
Reply ပါကြီးဖိုး December 7, 2012 - 5:46 am အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်တာတွေနဲ့ လက်ယဉ်လာခဲ့ကြတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်သစ်တွေထဲက ခေါင်းမာဂိုဏ်းဝင်တွေရဲ့လက်ချက် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဦးနေဝင်းဆိုရင် အိုကြီးအိုမအရွယ်တိုင်အောင် တည့်တည့်ပစ်မယ်လို့ တစ်နိုင်ငံလုံးကို ကြေငြာပြီး ကြိမ်းဝါးခဲ့တာပဲ။ တိုင်းပြည်ကောင်းအောင်ထူထောင်တော့မယ်ဆိုကာမှ အတွေးအခေါ်ဟောင်းအတိုင်း ခြိမ်းခြောက်သတ်ဖြတ် အကြမ်းဖတ်တဲ့နည်းနဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းမယ့် ခေါင်းမာဂိုဏ်းသားတွေ ရှိနေသေးတဲ့အတွက် လက်သည်တရားခံအစစ်ကို ရှာဖွေဖေါ်ထုတ်ဖို့ လိုနေပါပြီ။
Reply hotladylay December 7, 2012 - 6:10 am ပြည်သူတွေဟာဘယ်သူမှနောက်ကြောင်းပြန်မလှဲ့ခြင်ပါဘူး နောက်ကြောင်းပြန်န်မလှဲ့ချင်လို့လဲ အာဏာရှင်အစိုးရခေတ်က ပွင့်လင်းမြင်သာမှူမရှိတဲ့ ပြည်သူတွေအကျိုးခံစားခွင့်မရှိယုံမက စီမံကိန်းကြောင့် ပြည်သူတွေဖက်ကဆုံးရှုံးမှုတွေကို လက်တွေ့ခံလာကြရတဲ့ အခါ မကြောက်မရွံ့သတ္တိရှိရှိ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ကြတာကို အခု ရက်စက်စွာ ဖြိုခွင်းခဲ့လို့ အခုလိုပြဿနာ ပိုကြီးလာရတာပဲ။
Reply Nyein December 7, 2012 - 7:19 am “မည်သည့်အတွက် ဆန္ဒပြကြသည်ကိုသိလျှင် ၎င်းဆန္ဒပြကြ သူများ၏ လိုအပ်ချက်၊ သဘောထားကို နားလည်မှုရှိလျှင် အဆင်ပြေစေရန် လုပ်ဆောင်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသည်။”
ReplyှShet Shet December 7, 2012 - 10:07 am ခုလောက်ဆို သက်သေအထောက်အထားတွေ ဖျောက်ဖျက်ပြီးလောက်ပါပြီ။ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ပါးနပ်မှုပါ။ ကော်မရှင်ဖွဲ့လိုက်၊ ဖျက်လိုက်၊ ပြန်ဖွဲ့လိုက်နဲ့ အာရုံပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအတောအတွင်း မီးလောင်ဗုံးကို သယ်ယူပြောင်းရွှေ့၊ ဖျောက်ဖျက်လို့ရပါတယ်။ ဒါတွေကို ၀င်စစ်ဖို့က ကော်မရှင်ဖွဲ့စရာ မလိုပါဘူး။ အစိုးရပဲ။ ချက်ချင်းခေါ်စစ်လိုက်ရင် ပေါ်ပါတယ်။ ဒါမျိုး ဗိုလ်သန်းရွှေမြေးရဲ့ Day Club မှာ ဖြစ်ကြည့်ပါလား။ နာရီပိုင်းအတွင်း အဖြေမပေါ်တော့ ပြော။
Reply kyawkyawlwin December 7, 2012 - 12:31 pm စစ်တပ်ကို တပ်မတော်လို တန်ဘိုးရှိ အားထားနိုင်ဘို့ အခွင့်အလမ်းက ဒီနေရာကစရနိုင်ပြီ
Reply heinsein December 10, 2012 - 2:19 pm အဲဒီမှာထွက်နေတဲ့ သတ္တုတွေမှာ ရွှေ (သို့ မဟုတ် ) ယူရေနီယံ တွေပါရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်း
Reply စိမ်း December 14, 2012 - 2:31 am (((လက်ရှိ ကြေးနီစီမံကိန်းသည် ၁၉၈၄ ခုနှစ် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီ အစိုးရ လက်ထက်ကတည်းက စီမံကိန်းဖြစ်သော ကြောင့် မိမိ၏အမြင်တွင် နိုင်ငံ၏ ကိစ္စရပ်များကို နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားအားလုံးက သက်ဆိုင်သည့် စိတ်ဓာတ်ထားစေချင် ကြောင်း၊ အခွင့်အရေးတခုတည်းကို ကြည့်၍မရကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသည်။)))